Whitepaper: Omume Kacha Mma maka Ide ede Ahịa | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 9, 2013 Monday, June 8, 2015 Jenn Lisak Golding
Ọ bụ mmalite nke afọ. Ahịa dị n’isi ndị isi niile. Ọ dị mkpa na ị nọ n'elu egwuregwu gị ma na-ede akwụkwọ ntinye aka na-ekwenye ekwenye. Mana ọ dịkwa mkpa ịmata otu esi emepụta nke ga-amasị ọtụtụ ndị na-eme mkpebi.
M nnọọ n'anya na-arụ ọrụ na anyị amaghị software onye nkwado TinderBox, ha dịkwa mma maka ịmepụta ihe mmụta banyere otu esi emeziwanye ahịa ahịa gị. Akwụkwọ akụkọ ha na-adịbeghị anya, “Omume Kachasị Mma maka Ide Edemede Ahịa, ”Na-enye Atụmatụ na-esi mee ka gị ahịa amaghị mma, ma, ọ na-amaba n'ime miri dị iche iche nke na-eke a ahịa amaghị:
Differentdị ahịa dị iche iche
Kedu ihe na-abanye na ntinye
Ndụmọdụ maka itinye olile anya na atụmatụ gị
Etu esi hazie nkwupụta gị
Ntuziaka Nkwado Ahịa
Kedu ka ị si emepụta ahịa ahịa ugbu a? You na-eji ngwanrọ njikwa njikwa ma ọ bụ ị na -emepụta ha na akwụkwọ Okwu? Kedu sọftụwia ị na-eji? Ọ ga-amasị m ịnweta nzaghachi maka otu ndị na-ege anyị ntị si eduzi usoro ịre ahịa ahịa ha.
Jiri obi ụtọ na akwụkwọ akụkọ ahụ, ma nweere onwe gị ịgakwuru ndị otu TinderBox ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla!
Download Omume Kachasị Mma maka Writde Akwụkwọ Mgbasa Ozi Ahịa
Tags: omume kacha mmacontent MarketingAmụma Ahịaụdị ahịa ahịa